Lavazza Desea Igwe Kọfị - Imewe Mmewe
Igwe Kọfị Igwe eji eme enyi bu ihe eji eme ka udiri azumazu nke agwa kọfị nke Italy: site na espresso rue cappuccino ma ọ bụ latte. Ihe mmetụ ahụ na-ahazi nhazi dị iche iche abụọ - otu maka kọfị na otu maka mmiri ara ehi. Enwere ike hazie ihe ọ drinksụ drinksụ ndị ahụ maka ọrụ nkwalite maka okpomoku na ụfụfụ mmiri ara ehi. Egosiputa ozi di nkpa n’etiti iji akara ngosi enyo. Ngwaọrụ ahụ na-abịa n’ike igwe mpekere mara mma ma na-etinye asụsụ ụdị Lavazza nwere iji sọọsọ na-achịkwa, nkọwa a nụchara anụcha na nlebara anya pụrụ iche na agba, ihe & nkwupụta ụda; imecha.
Aha oru ngo : Lavazza Desea, Aha ndị na-emepụta ya : Florian Seidl, Aha onye ahịa : Lavazza.
Igwe Kọfị Florian Seidl Lavazza Desea